Ifulethi 501 Važec - I-Airbnb
Ifulethi 501 Važec
Važec, Žilinský kraj, i-Slovakia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-ML Tatry,
I-Apartment 501 itholakala maphakathi ne-Važec, izinyathelo ezimbalwa kuphela ukusuka esigcawini sendawo, enokubukwa okuhle kwe-High Tatras. I-Apartment 501 ihlanganisa ihholo lokungena, amagumbi amabili, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugezela elibanzi elinendlu yangasese neshawa. Kuwo womabili amakamelo, kukhona i-TV enezinhlelo eziningi ezahlukene zasekhaya nezangaphandle. I-Wi-Fi iyatholakala kuyo yonke indawo.
Ifulethi lisanda kulungiswa futhi lifakwe ifenisha entsha, yesimanje. Yize imaphakathi nedolobhana, ithule ngakho-ke inikeza indawo yokuphumula ngaphansi kwezintaba zeTatra. Kule ndawo, kunethala elitholakala ehlobo. Kuzivakashi ezincane kunazo zonke sinomgodi wesanti onamathoyizi.
ubusuku obungu-7 e- Važec
Eduze nefulethi kunezitolo eziningi zokudla, indawo yokudlela, ikhefi, ikhemisi kanye neposi. Idolobhana ngokwalo linikeza izivakashi zalo izinto zokungcebeleka ezimbalwa, njengokuhamba izintaba, ukugibela ibhayisekili, ukwenza amakhowe noma ukushushuluza. Ngqo edolobhaneni kukhona uMgede waseVažecká, ongomunye wemigede edume kakhulu enyakatho yeSlovakia. Izivakashi zedolobhana zinethuba lokuvakashela i-House of Jan Hala, eyaziwa ikakhulukazi njengomdwebi wesigodi esihlukile saseSlovak kanye nempilo yabantu bakhona kanye nomdwebi wezincwadi eziningi zezingane.
I-Važec iyisiqalo esihle kakhulu sohambo oluya e-High noma Low Tatras noma e-Liptov, njengoba itholakala maphakathi ne-Liptovský Mikuláš ne-Poprad.
Ibungazwe ngu-ML Tatry,
Kufanele sitholakalele izivakashi ngesikhathi sokuhlala kwazo isikhathi esiningi, ukuze zikwazi ukusithinta nganoma iyiphi inkinga. Sizokujabulela futhi ukukweluleka lapho uhlela uhambo lokuzungeza indawo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Važec namaphethelo